Torohevitra sy fika momba ny fomba hitsitsiana vola rehefa mamandrika fitsangantsanganana | Fitsangatsanganana tanteraka
Torohevitra sy tetika amin'ny fomba fitsitsiana vola rehefa mamandrika fitsangantsanganana an-tsambo
Mihabetsaka ny olona mandeha sambo fitsangantsanganana ary miverina ihany koa, raha ny antontan'isa maherin'ny 50% amin'ireo nanandrana izany no miverina. Azonay antoka fa ny iray amin'ireo zavatra manosika anao hamerina, ankoatry ny fampiononan'ny sambo ny tenany sy ny toerana alehany, dia ny vidiny, ary raha fantatrao ny fanaovana azy afaka mahazo vidy varotra tena izy ianao ary hitahiry vola rehefa manao ny famandrihanao.
Manome anao làlana vitsivitsy izahay hahafantaranao izay fotoana mety kokoa amin'ny vidiny tsara indrindra, nefa mitandrema! Tsy diso izany.
1 Fitsangatsanganana an-tongotra iray (2 × 1)
2 Enim-bolana talohan'izay hitahiry
3 Misy tolotra minitra farany ve?
4 Araraoty ny fampielezan-kevitr'ireo orinasa mpandefa entana
Fitsangatsanganana an-tongotra iray (2 × 1)
Ho hitanao izany orinasa maro no manolotra 2 × 1 amin'ny diany, ny zavatra ratsy ihany amin'ity karazana tolotra ity dia voafetra ny anjaranao. Ohatra, matetika izy ireo dia roa ho an'ny nosy grika na Mediteraneana. Raha tsy fantatrao ny faritra, na talanjona amin'izany ianao ary tsy manana olana amin'ny fisafidianana ny daty, manome toky anao aho fa safidy tsara hivezivezena amin'ny antsasaky ny vidiny ary manana ny tombony rehetra ianao raha nandoa ny feno tapakila. Eny tokoa, ny roa-ho-iray matetika dia manondro ny tapakila, tsy maintsy mandoa ny toro-hevitra ho an'ny olona roa ianao sy ny saram-pitaterana tsirairay, fa mivezivezy eo afovoany ianao ... inona indray no tadiavinao!
Enim-bolana talohan'izay hitahiry
Raha fantatrao tsara ny datin'ny dia sy ny toerana itodihanao ary izany koa farafaharatsiny farafaharatsiny enim-bolana mialoha, izao no fotoana mety indrindra hifampidinihana ny vidiny. Io ilay tsipika ho hitanao ny tolo-kevitra tsara indrindra, tsy dia be loatra noho ny vidiny, izay mety azo antoka aza, fa satria afaka misafidy ny kabine tsara indrindra ianao.
Midika inona ny vidiny azo antoka? Ity dia tetika ampiasain'ny orinasan-tseranana sasany izay anomezan'izy ireo toky fa raha mahita io sambo io ianao, amin'ny vidiny ambany miaraka amin'ireo fepetra mitovy, dia homeny anao izany vidiny izany.
El Ny salan'isa fihenam-bidy azonao amin'ny famandrihana farafahakeliny 6 volana mialoha dia matetika manodidina ny 50%, ary indraindray mahatratra 70% izany ary mieritreritra fa afaka mamandrika am-paosy 50 euro ianao. Indraindray io tahiry io dia tandindomin-doza.
Mazava ho azy ity famandrihana mialoha ity dia tena ilaina tokoa raha mandeha manao vakansy ianao mianakavy Na mila tranom-pianakaviana ianao, satria (ny mahazatra indrindra) dia ny 25% amin'ny fahafahan'ny sambo ihany no natao ho an'ny tranom-pianakaviana.
Misy tolotra minitra farany ve?
Ary ankehitriny izahay dia mankamin'ny lafiny mifanohitra sy ny tolotra minitra farany, ilay tonga any amin'ny masoivoho ianao ary miteny ao anatin'ny telo andro fa te-hiditra aho, ary manangom-bola. Vitsy ihany no tsara vintana amin'izany, fa mety ho iray na iray amin'izy ireo ianao. Manome anao fampahalalana iray izahay 80% amin'ny tolotra farany dia ho an'ny mpivady ary ampitaina latsaky ny 7 andro mialohaSamy mila miovaova be ianareo amin'ny làlana.
Araraoty ny fampielezan-kevitr'ireo orinasa mpandefa entana
Saika ny orinasam-pandefasana rehetra no manana vanim-potoana fihenam-bidy sy fampiroboroboana arakaraka ny fotoan'ny taona ho an'ny save money. Ho fanampin'izay, tonga any amin'ny mailaka anao ireo fampiroboroboana ireo ireo olona manana karatra na fangatahana fahatokisana. Raha fantatrao fa tianao ny mandeha miaraka amin'ilay orinasan-tsambo noho ny serivisy omeny anao, ity no fotoana tsara indrindra ahazoana vidiny lafo.
Orinasa mpandefa entana ihany koa no mivoaka fisondrotana amin'ny karazana "zava-pisotro maimaim-poana" dia ampidirina ao anaty vidiny ny Wi-Fi, omena fitsaboana spa ianao, na koa afaka mandeha any amin'ny trano fisakafoanana izay tafiditra ao anaty menio miaraka amin'ny menio fanandramana izay tafiditra ao anaty tapakila.
Ankoatr'izay, izay ny fampielezan-kevitr'ireo orinasan-tsambo dia ny fampielezan-kevitry ny masoivoho, na ireo manana birao na ireo miasa amin'ny Internet.
Ary mazava ho azy fa misy vondrona sasany, toy ny tanora sy ny lehibe efa manana tombony manokana. eto Manana ohatra mazava ianao momba ny karazana dia matetika atolotra an'ireo zokiolona ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » General » Torohevitra sy tetika amin'ny fomba fitsitsiana vola rehefa mamandrika fitsangantsanganana an-tsambo
Inona avy ireo akanjo tokony horaisiko amin'ny fitsangantsanganana? Ataoko ao anaty valizy daholo ve ny zava-drehetra?